I-Hdmi Extender, i-Hdmi Switcher, i-Wireless 4k i-Hdmi Extender-Iqela leBrocade
I-Brocade Smart Space Technology Co, Ltd.yishishini elibhalisiweyo eliphambili kwiPhondo laseSichuan, China, kwaye liyinxalenye yenkqubo yotyalo-mali enkulu ye-High Tech Zone eChengdu. Iimveliso zethu ikakhulu zibandakanya ukutshintsha kwevidiyo yokucacisa okuphezulu kunye nabasasazi bayo, kunye neenkcazo zokudlulisela imveliso yexesha-lokwenyani elingenakonakalisa.
Itekhnoloji eyimveliso ephambili ekhokelayo ezimeleyo kunye nophando oluzinzileyo kunye namandla okuphucula, ngenani lamalungelo awodwa omenzi wechiza kunye neemveliso ezinelungelo elilodwa lomenzi. Ukuqhekeka kobuchwephesha benkcazo yokuhanjiswa kweedatha kunye nevidiyo ezinje ngenkcazo ephezulu, isisombululo esiphakamileyo, ukulibaziseka okungasasebenziyo, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, umgama omde, njl.
Iimveliso zothotho lweBrocade Zhizhi ikakhulu zibandakanya inkcazo ephezulu yokulahleka kwexesha-lokwenyani, kunye nokucaciswa okuphezulu kunye nokuhanjiswa kwevidiyo kunye nokusasazwa. Zisetyenziswa ngokubanzi kwimveliso ye-HDMI yeaudio-yokubonwayo, ukufundiswa kwemultimedia, iinkomfa zevidiyo kunye nemfonomfono, imiboniso emikhulu yesikrini, imiboniso, ezemali kunye nophando lwenzululwazi, kunye nokudubula ifilimu kunye nomabonwakude kunye nezinye iindawo ezimileyo.
Ukuzimisela ukwakha ishishini lokuqala lodidi olutsha.